1Sainte Taratasy Jaona – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / 1Sainte Taratasy Jaona
1:1 Ary izay hatrany am-piandohana, izay efa rentsika, izay efa hitan'ny masonay, Izay efa nibanjina, ary izay tokoa ny tananay no nanohina: Izy no Teny Fiainana.
1:2 Ary ny fiainana efa nanehoana. Ary izahay efa nahita, ary Mijoro ho vavolombelona, ary ambaranay aminareo: ny Fiainana Mandrakizay, izay tao amin'ny Ray, ary izay niseho ho antsika.
1:3 Ary Izay efa hitanay sy renay, dia ambaranay aminareo, mba, koa, mba hahazoanareo firaisana aminay, ary toy izany koa fa ny fiombonana mba ho eo amin'ny Ray sy amin'i Jesosy Kristy Zanany.
1:4 Ary izao no manoratra ho anareo, mba hifaly, ary toy izany koa fa ny fifalianareo mba ho tanteraka.
1:5 Ary izao no filazana izay efa reko taminy, ary izay ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava, ary ao aminy tsy misy haizina.
1:6 Raha milaza fa isika: Manana firaisana aminy, nefa no mandeha ao amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy nilaza ny marina.
1:7 Fa raha mandeha eo amin'ny mazava, araka izay koa ao amin'ny mazava, Avy eo dia misy fiombonana amintsika samy, ary ny ran'i Jesosy Kristy, Zanany, no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra.
1:8 Raha milaza fa tsy manana ota, Avy eo isika dia mamitaka ny tenantsika ary ny marina tsy ato anatintsika.
1:9 Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina, mba mamelà ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra.
1:10 Raha milaza fa tsy nanota, Avy eo isika dia mampandainga Azy, sy ny Teniny tsy ato anatintsika.
2:1 My kely lahy, izany no soratako aminareo, mba tsy hanotanareo. Fa raha misy efa nanota, dia manana Solovava ao amin'ny Ray, Jesoa Kristy, ny Marina.
2:2 Ary Izy no avotra noho ny fahotantsika. Ary tsy noho ny fahotantsika, fa koa ho an 'ireo ny an'izao tontolo izao.
2:3 Ary afaka matoky isika fa efa mahalala azy io: mitandrina hanaraka ny didiny.
2:4 Na iza na iza milaza fa mahalala azy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny.
2:5 Fa na iza na iza mitandrina ny teniny, Marina fa ao aminy ny fitiavana an'Andriamanitra tanteraka. Ary Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika.
2:6 Na iza na iza dia manambara ny tenany mba hitoetra ao aminy, tokony handeha araka izay nandeha an-tongotra ny tenany.
2:7 Tena malala, Aho tsy nanoratra ho anareo didy vaovao, fa ny didy efa ela, izay efa hatrany am-piandohana. Ny didy ela dia ny Teny, izay efa renareo.
2:8 Ary koa, Izao soratako ho aminareo didy vaovao, dia ny fahamarinana ao aminy sy eo aminareo. Fa ny haizina efa lasa, ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny.
2:9 Na iza na iza dia manambara ny tenany ho ao amin'ny mazava, nefa mankahala ny rahalahiny, dia ao amin'ny maizina na dia ankehitriny aza.
2:10 Na iza na iza tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava, ary tsy misy mahatonga ny fahatafintohinana ao aminy.
2:11 Fa na iza na iza mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina izy,, ary tsy fantany izay alehany. Fa ny maizina no efa nahajamba ny masony.
2:12 Soratako ho aminareo, kely lahy, satria voavela ny helokao noho ny anarany.
2:13 Soratako ho aminareo, ray, satria efa mahalala Ilay hatramin'ny voalohany. Soratako ho aminareo, tanora, satria efa naharesy ilay ratsy.
2:14 Soratako ho aminareo, ny ankizy madinika, satria ianao dia efa nahalala ny Ray. Soratako ho aminareo, tovolahy, satria ianareo no mahery, ary ny Tenin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, ary efa naharesy ilay ratsy.
2:15 Aza mifidy ny ho tia izao tontolo izao, na ny zavatra izay ao amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao, ny fitiavana ny Ray dia tsy ao anatiny.
2:16 Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo, sy ny fanirian'ny maso, ary ny fireharehan'ny ny fiainana izay tsy avy amin'ny Ray, fa avy amin'izao tontolo izao.
2:17 Ary izao tontolo izao mandalo, sy ny faniriany. Fa na iza na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra no mitoetra ho mandrakizay.
2:18 Little lahy, izany no ora farany. Ary, tahaka ny efa renareo fa ho avy ny Antikristy, koa ankehitriny antikristy maro no tonga. izany, no ahafantarantsika fa izao no ora farany.
2:19 Dia nivoaka avy teo aminay, nefa tsy mba namantsika. Fa, raha toa ka efa avy amintsika, Azo antoka dia ho naharitra niaraka taminay. Fa toy izany, izany no haseho fa tsy ny azy ireo dia avy amintsika.
2:20 Nefa manana ny fanosorana ny Iray Masina, ary ianao mahalala ny zavatra rehetra.
2:21 Efa tsy voasoratra aminareo toy ny amin'ny olona izay tsy mahalala ny marina, Fa ny amin'ny olona izay mahalala ny fahamarinana. Fa tsy misy lainga avy amin'ny fahamarinana.
2:22 Iza no mpandainga, afa-tsy izay mandà fa i Jesoa no Kristy? Ity iray ity dia ny Antikristy, izay mandà ny Ray sy ny Zanaka.
2:23 Tsy misy olona izay mandà ny Zanaka no manana ny Ray koa. Na iza na iza manaiky ny Zanaka, ihany koa no manana ny Ray.
2:24 Ary ny aminareo, dia aoka izay efa renareo hatramin'ny voalohany ho ao aminareo. Raha ny zavatra efa renareo hatrany am-piandohana mitoetra ao anatinareo, avy eo ianao, koa, dia hitoetra ao amin'ny Zanaka sy ny Ray.
2:25 Ary izao no teny fikasana, izay no efa nampanantenainy antsika: Fiainana mandrakizay.
2:26 Na dia soratako ho anareo izany zavatra izany, noho ireo izay mamitaka anareo.
2:27 Fa ny aminareo, Aoka ny fanosorana izay efa noraisinareo taminy hitoetra ao anatinareo. Ary noho izany, ianao tsy mila olona hampianatra anareo. Fa ny Fanosorana no mampianatra anareo ny zava-drehetra, ary izany no fahamarinana, ary tsy lainga. Ary toy ny fanosorana dia nampianatra anao, tomoera ao aminy.
2:28 Ary ankehitriny, kely lahy, tomoera ao aminy, ka rehefa miseho, mba hananantsika finoana, ka mety tsy ho menatra amin'ny azy tamin'ny fiavian'ny.
2:29 Raha fantatrareo fa marina, dia aoka ho fantatrareo, koa, fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany.
3:1 Jereo inona no karazam-pitiavana ny Ray ho antsika, fa ho antsoina hoe, ary ho lasa, ny zanak'Andriamanitra. Noho io, izao tontolo izao tsy mahalala anay, fa tsy nahalala Azy.
3:2 Tena malala, isika ankehitriny, ny zanak'Andriamanitra. Fa izay ho toetsika rahatrizay dia tsy mbola niseho. Fantatsika fa raha hiseho Izy no, isika, dia ho tahaka Azy, fa ho hitantsika Izy tahaka Azy.
3:3 Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy, miaro ny tenany masina, tahaka Izy koa dia masina.
3:4 Izay rehetra manota, ihany koa ny manao ratsy. Fa ny ota no heloka.
3:5 Ary fantatrareo Jesosy dia niseho tamin'ny mba hahazoany mba hanaisotra ny ota. Fa ao amin'ny tenany tsy misy fahotana.
3:6 Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Fa na iza na iza fahotana tsy nahita azy, ary tsy mahalala azy.
3:7 Little lahy, aoka tsy hisy hamitaka anareo. Na iza na iza manao ny rariny fotsiny, tahaka Azy ihany koa.
3:8 Na iza na iza manota dia avy amin'ny devoly. Fa ny devoly fahotana hatramin'ny voalohany. Izany no antony, ny Zanak 'Andriamanitra niseho, ka dia mba hamongorana ny asan'ny devoly.
3:9 Ireo izay rehetra efa naterak 'Andriamanitra no tsy manota. Fa ny zanaka no mitoetra ao aminy, ary izy no tsy afaka hanota, satria teraka 'Andriamanitra.
3:10 Amin'izao fomba izao, zanak 'Andriamanitra, dia asehon'ny, ary koa ny zanaky ny devoly. Izay rehetra tsy marina, dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, toy ny olona izay tsy tia ny rahalahiny.
3:11 Fa izao no filazana izay efa renareo hatrany am-piandohana: mba maintsy mifankatia.
3:12 Aza manahaka an'i Kaina, izay avy amin'ny ratsy, ary izay namono ny rahalahiny. Ary nahoana no hamono azy? Noho ny nataony ratsy, fa ny rahalahiny fotsiny ny asany dia.
3:13 Raha halan'izao tontolo izao ianareo, rahalahy, aza gaga.
3:14 Fantatsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Fa tsy tia tahaka ny rahalahy. Na iza na iza tsy tia, mitoetra ao amin'ny fahafatesana.
3:15 Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona. Ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny.
3:16 Fantatsika ny fitiavan 'Andriamanitra toy izany: satria Izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Ary noho izany, dia tsy maintsy hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy.
3:17 Na iza na iza manana ny fananana eto amin'ity tontolo ity, ka mahita ny rahalahiny ho sahirana, nefa nakimpiny ny fony ho azy: ahoana moa ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny?
3:18 My kely lahy, aoka tsy ho tia amin'ny teny ihany no, fa amin'ny asa sy ny fahamarinana.
3:19 Amin'izao fomba izao, dia ho fantatsika fa avy amin'ny marina, ary dia hidera ny fontsika eo anatrehany.
3:20 Fa na dia ny am-po miteny ratsy antsika, Andriamanitra dia lehibe noho ny fontsika, ary fantany ny zava-drehetra.
3:21 Tena malala, raha ny am-po tsy tsiny antsika, dia afaka matoky an'Andriamanitra;
3:22 ary na inona na inona, dia mangataka ny azy, isika, dia raisintsika avy aminy. Fa izahay mitandrina ny didiny, ary hanao ny zavatra izay ankasitrahana eo imasony.
3:23 Ary izao no didiny: dia ny hinoantsika ny anaran'i Zanany, Jesoa Kristy, sy ny hifankatiavantsika, araka izay efa nandidiany antsika.
3:24 Ary ireo izay mitandrina ny didiny mitoetra ao aminy, ary Izy kosa ao aminy. Ary fantatsika fa mitoetra ao amintsika izany: amin'ny alalan'ny Fanahy, izay efa nomena antsika.
4:1 Tena malala, aza vonona ny mino ny fanahy rehetra, fa fantaro aloha raha ny fanahy mba hahitana raha avy amin'Andriamanitra ireny,. Fa maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao.
4:2 Ny Fanahin'Andriamanitra dia mety ho fantatra toy izany. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa i Jesoa Kristy dia tonga tamin'ny nofo no avy amin'Andriamanitra;
4:3 ary ny fanahy rehetra izay mifanohitra Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary ity iray ity dia ny Antikristy, ilay efa renareo avy, ary na dia ankehitriny aza izy eo amin'izao tontolo izao.
4:4 Little lahy, ianareo dia avy amin'Andriamanitra, ary mba efa naharesy azy. Fa Izay ao aminareo dia lehibe noho izay ao amin'izao tontolo izao.
4:5 Izy ireo 'izao tontolo izao. Noho izany, Dia izay manonona ny momba izao tontolo izao, ary izao tontolo izao mihaino azy ireo.
4:6 Avy amin'Andriamanitra izahay. Na iza na iza mahalala an'Andriamanitra, mihaino antsika. Na iza na iza no tsy mba avy amin'Andriamanitra, dia tsy mihaino antsika. Amin'izao fomba izao, no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana avy amin'ny fanahin'ny fampiviliana.
4:7 Tena malala, aoka isika hifankatia. Fa ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra. Ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra.
4:8 Na iza na iza tsy tia, tsy mahalala an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia fitiavana.
4:9 Ny fitiavana an 'Andriamanitra no nanao toa antsika toy izany: Andriamanitra naniraka ny Zanany lahitokana ho amin'izao tontolo izao, ka mba hahavelona antsika amin'ny alalany.
4:10 Izany no fitiavana: tsy toy ny hoe efa tia an'Andriamanitra, fa Izy efa tia antsika, ary noho izany dia naniraka ny Zanany ho avotra noho ny fahotantsika.
4:11 Tena malala, raha efa izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, isika kosa mba tokony hifankatia.
4:12 Tsy nisy olona nahita an'Andriamanitra. Fa raha mifankatia isika, Andriamanitra mitoetra ao amintsika, sy ny fitiavany dia tanteraka ato amintsika.
4:13 Amin'izao fomba izao, no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary Izy ato amintsika: satria nisy natolony ho antsika ho afaka amin'ny ny Fanahiny.
4:14 Ary izahay efa nahita, ary Mijoro ho vavolombelona, fa ny Ray efa naniraka ny Zanaka ho Mpamonjy izao tontolo izao.
4:15 Na iza na iza no niaiky fa i Jesoa no ilay Zanak'Andriamanitra, Andriamanitra mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra.
4:16 Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana. Ary izay mitoetra amin'ny fitiavana, no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy.
4:17 Amin'izao fomba izao, the love of God is perfected with us, so that we may have confidence on the day of judgment. For as he is, so also are we, in this world.
4:18 Fear is not in love. Fa tsy, perfect love casts out fear, for fear pertains to punishment. And whoever fears is not perfected in love.
4:19 Noho izany, let us love God, for God first loved us.
5:1 Izay rehetra mino fa i Jesoa no Kristy, naterak 'Andriamanitra. Ary izay rehetra tia an'Andriamanitra, izay manome izay niteraka, ihany koa dia tia izay naterak'Andriamanitra 'Andriamanitra.
5:2 Amin'izao fomba izao, ahafantarantsika fa tia ireo naterak'Andriamanitra: rehefa tia an'Andriamanitra ary araho ny didiny.
5:3 Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra: dia ny hitandremantsika ny didiny. Ary ny didiny tsy mavesatra.
5:4 Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary izao ny fandresena izay maharesy izao tontolo izao: ny finoantsika.
5:5 Iza moa no maharesy izao tontolo izao? Ihany-tsy izay mino fa Jesosy no Zanak'Andriamanitra!
5:6 Izao no iray ilay avy tamin'ny rano sy ny rà: Jesoa Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany, fa tamin'ny rano sy ny ra. Ary ny Fanahy no no manambara fa Kristy no fahamarinana.
5:7 For there are Three who give testimony in heaven: ny Ray, the Word, ary ny Fanahy Masina. And these Three are One.
5:8 And there are three who give testimony on earth: the Spirit, and the water, ary ny rà. And these three are one.
5:11 And this is the testimony which God has given to us: Fiainana mandrakizay. And this Life is in his Son.
5:14 Ary izao no fahasahiana ananantsika eo Andriamanitra: fa na inona na inona isika, dia mangataka, araka ny sitrapony, dia mihaino antsika.
5:15 Ary fantatsika fa mihaino antsika, na inona na inona no angatahinay; Noho izany dia fantatsika fa afaka mahazo ny zavatra izao no angatahinay azy.
5:16 Na iza na izay mahatsapa fa ny rahalahiny no nanota, amin'ny ota izay tsy ho amin'ny fahafatesana, aoka izy hivavaka, ary ny fiainana dia homena azy izay dia tsy nanota ho amin'ny fahafatesana. Misy fahotana ho amin'ny fahafatesana izay. Tsy miteny aho hoe fa na iza na iza dia tokony hangataka amin'ny anaran'ny izany fahotana izany.
5:17 Izay heloka rehetra dia ota. Fa misy ota ho amin'ny fahafatesana.
5:18 Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota. Fa tsy, fahaterahana indray an'Andriamanitra miaro azy, ary ny ratsy dia tsy misy afaka mikasika azy.
5:19 Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao manontolo dia hampitoerina amin'ny faharatsiana.
5:20 Ary fantatsika fa ny Zanak'Andriamanitra no manana tonga, ary izy efa nanome antsika fahazavan-tsaina, ka mba ho fantatsika ilay tena Andriamanitra, ary toy izany koa mba tsy hialana amin'ny ny tena Zanany. Izany no tena Andriamanitra, Ary izao no fiainana mandrakizay.
5:21 Little lahy, arovy ny tenanareo amin'ny fivavahan-diso. Amen.